Grand Afaan Oromoo Project: Jabaannee jabaadhaa ! -
Grand Afaan Oromoo Project: Jabaannee jabaadhaa !
bilisummaa February 19, 2017	1 Comment
Loqodoota Saddeeti Jaatanii Guddicha Afaan Oromoo keessatti irratti hojjatamaa jiran keessaa
1. Gumii Loqoda Harargee( Ituu, Humbannaa fi 4N Qalloo,Anniyya) 1ffaa bahuu fi ammallee jabaattanii itti fufuu keessaniif ulfaadhaa ! Isiniin boonna !
2. Gumii Loqoda Booranaa hojii boonsaa hojjattanii 2ffaa bahuun keessan dinqiidha itti fufaa jenna.
3. Gumii Loqoda Arsii ( Sikkoo fi Mandoo) 1ffaa bayaa turuun keessan ni yaadatama. Amma garuu 1ffaa irraa 4ffatti gadi bu’uun keessan baay’ee akka hojjatamaa hin jirre garsiisa.
Haati Gooticha Leenjisoo diigaa waan jette dhageessanii? ” Ani Dahee Koloobaan gahee, amma booda waan jettaniin isintu beeka” jette jedhan. Keessan dubbiin achitti.
4. Gumii Loqoda Maccaa isinillee 2ffaa irraa gara 3ffaa,4ffaa fi 5ffaa bu’uun hirmaannaan keessan akka dabaluu qabu mul’isa.
5. Gumii Loqoda Gujiin yeroo cufu hirmaannaan keessan guddaadha jabaadhaa jenna.
6. Gumii Loqoda Tuulamaa hojii boonsaadha jabaadhaa
7. Gumii Loqoda Karrayyuu fi 8. Walloo daran jabaachuu qabdan iyyaa iyya dabarsaa . Gargaarsa yoo barbaaddan nutti iyyadhaa .
Previous Somali Liyu Police is a disgrace to the ancient Cushitic (Kushitic) nations.
Next Waraabeecha/(Bineensa) Biyya Bineesummaan Isaa Beekamutti Itillee Naaf Afaa Jedhu Mammaaksa Oromoo Keessatti Dhageeyee Hin Beeknu!
Waa,ee translation afaan Oromoo karaa afaan birootittii hiiku irraati hojjachuu barbachisaa Jabaadha hayyoota keenya
Application afaan Oromoo karaa afaan birootittii hiiku nu irraati hodha!